AI magetsi ekufambisa neAIFPv3: AI ndege dzisingaratidzi ... Sei
mubvunzo AI magetsi ekufambisa neAIFPv3: AI ndege dzisingaratidzi ... Sei
1 gore 3 ago #801 by laurentCazorla
Ini ndakasika zvombo zvangu Cevenn'air zvikepe ne FSX zvinyorwa B738 uye CRJ700 ndakazvienzanisa ini uye ini regulary ndinobhururuka. Zvisinei ini ndaida kuumba yangu AI magetsi neAIFPv3 ... Zvose zvakakodzera kuisa ndege dzeAI uye kuzvinyorera, pandinozotanga FSX Steam iyo inoshandura iyo nzvimbo itsva asi ini pandinoenda kuChikepe apo ndege dzangu dzinofungidzirwa kuti ndizviratidze paIndaneti, nenguva yandakaronga neAIFP, chero ipi zvayo inoratidzira ... Ndiri kukumbira kana iri nekuda kweFSX Steam. Ichokwadi apo ini ndinoda kuisa AIFP ne Steam (SE) handigoni kuenderera mberi. Ndine mvumo yekugadza seFSX. Ndakatotanga nyika yeAI traffics uye ini ndatoedza kuisa KLM WoAI B738 pane ndege EHAM / LFMT, ndinosangana nechinetso chimwe chete ...
Ndinoda kuziva kana kune imwe nzira yekugadzira traffics yeAI pasina kupfuura neAIFP ... Ndinonzwa sekunetseka
Time chokusika peji: 0.602 mumasekonzi